Awardzee: Otu esi achọta onyinye na ntanetị | Martech Zone
Companieslọ ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na-ele anya mgbe niile iji wulite ma mara ndị ahịa ha. Otu nnukwu atụmatụ bụ ntinye ntinye. Onu ogugu nwere otutu uru karia ndi ozo:
Awards na-enye akwa ozi ọma fodder maka ndị ọkachamara PR ka pitch ozi ọma na ihe onwunwe.
Ebe a na-enye onyinye na ihe ngosi na-agakarị nke ukwuu dị mkpa ndị na-ege ntị, na-agbasawanye iru gị.
Ebe a na-enye onyinye na-ejikarị ndị ọka ikpe eme ihe mmetụta, ya mere iburu akara gi n'ihu ha di egwu.
Ụgwọ bụ ntụkwasị obi na ikike ikike na ị nwere ike ịkekọrịta ma kwalite na saịtị nke gị na ọwa mmekọrịta.
Nsogbu, n'ezie, na-anwa chọta ohere mmeri tupu ị gụọ banyere mmeri onye asọmpi gị na akwụkwọ akụkọ mpaghara ma ọ bụ mbipụta azụmaahịa n'ịntanetị. Banye Onyinye, nchekwa data zuru ezu nke onyinye na ntanetị.
Afọ ole na ole gara aga mgbe m na-arụ ọrụ na PR, e nyere m ọrụ ịchọta ụfọdụ onyinye ụlọ ọrụ ndị ahịa. Ọ bụ ọrụ jọgburu onwe ya inwe Google onyinye kacha mma maka awa na awa… na awa na awa. Ya mere ọnwa ole na ole gara aga, mụ na ezigbo enyi m malitere nchekwa data iji mee ka usoro a dị mfe. Ma ị nọ n’ahịa, PR, onye ọchụnta ego, nkwukọrịta, HR - anyị nwere olile anya na saịtị a ga-eme ka ndụ gị dịtụ mfe. Nick Pennebaker, Onye nchoputa
Awardzee na-enye gị ohere ịme ederede ederede nke onyinye ahụ yana nyocha site na mpaghara na otu. E nyere njikọ maka onyinye, nzukọ, na otu na mpaghara na nsonaazụ.
Ọ bụrụ na m nwere otu ihe m chọrọ, ọ ga-abụkwa ụbọchị a ga - enye onyinye - ọ ga - adị mma ịhụ naanị onyinye a ga - enye maka ntinye n'okpuru ụbọchị 30 sochirinụ karịa ịhụ onyinye ọ bụla n'ebe ahụ. Ma hey - nke a bụ otu heck nke nnukwu mmalite. Ekele dịrị Nick maka ịrụsi ọrụ ike!
Okpu okpu na- James Hahn nke Abụọ maka iwetara Awardzee m!
Tags: enọkwuo nchekwa datankwanye ugwuchọta enọchọta onyinye na ntanetịnick pennebakerprmmekọrịta ọhaneze
Kedu ihe bụ Nkwado Mgbasa? Olee Otú I Si Azụlite Ya?
Ndi Ntanetị Gị Na-ekwu Okwu Dị Ka Amazon?